Jens Petter Hauge wareysi uu siiyay The Athletic | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Jens Petter Hauge wareysi uu siiyay The Athletic
Jens Petter Hauge wareysi uu siiyay The Athletic
Waxaan lahadlayay wakiiladeyda si aan u sameeyo qorshe yar. Waxaan doonayay inaan u gudbo wareega xiga ee is reeb reebka Europa League ee Bodo / Glimt anoo guushu ku raacday Milan. Bodo heerkaas wuxuu 18 ama 19 dhibcood ka sareeyaa horyaalka oo wuxuu ka sareeyaa kaalinta labaad waxaana ku kalsoonahay in xitaa haddii aan baxo ay weli ku guuleysan doonaan horyaalnimada. Taasi waxay ahayd waqtigii saxda ahaa ee aan ka tagi lahaa kooxdeyda. ”
Wax walba si dhakhso leh ayey u socdeen. Hooyaday waxay la noqotay inay talaabo weyn ii tahay inaan u guuro Milan iyo Talyaaniga, luqad cusub oo aan ku ogaado iyo waxyaabo la mid ah. Waxaan ku noolnahay ku dhowaad 50,000 qof halkan Bodo. Waa wax yar, gaar ahaan hadda waxaan ku noolahay magaalo weyn, marka sida iska cad waxay ii tahay isbeddel weyn. ”
Ciyaartoyda u waxyooday markii uu yaraa:
“Markii aan yaraa, waxaan daawaday ciyaartoy ku ciyaaraysay labada lugood. Waxay u muuqatay sidii tayo wanaagsan oo la haysto. Noloshayda oo dhan, waxaan u adeegsaday bidix iyo midig labadaba inaan toogto oo aan dhaafo, markaa hadda si qaawan ayay iigu timid inaan isticmaalo labada cagood. Waxaan daawadaa Didier Drogba, Frank Lampard, iyo Juan Mata. Laakiin markii aan yara weynaaday, waxaan bilaabay daawashada Eden Hazard. Isaga ayaa ugu cadcad. ”
Xulashada AC Milan:
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan doortay AC Milan. Waxaan maalin walba ku baashaalaa halkan. Waxay ii tahay fursad cusub inaan ku barto waxyaabo cusub oo ku saabsan kooxdan, afka Talyaaniga iyo magaalada. Luqadda waxaan kuu sheegi karaa in bilowgii kaliya aan aqaanay kalmado yar oo muhiim ah oo kubada cagta ah si aan u fahmo waxa garoonka laga sheegayo. Markaad maqasho dhawaqa iyo ereyada maalin kasta waxaad bilaabeysaa inaad si dhaqso leh u baratid. Mararka qaar Ibrahimovic ayaa ii tarjuma. ”
Hauge oo dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeeyay ee Serie A-da kulankii Napoli:
“Waxay ahayd fiidnimo cajiib ah. Waxaan xasuustaa markaan arkay inay wax sifiican ugu socdeen Bodo ciyaarteena kahor, sidaa darteed waxaan hubaa inay ku guuleysan doonaan horyaalnimada. Inaan gool ku dhammeeyo oo aan saddexda dhibcood ka helo garoon adag oo dhib badan waxay ahayd dareen weyn. ”
Previous articleStudy a Bachelor’s in the USA Scholarship
Next articleBREAKING NEWS: Ethiopia Dagaal Culus oo ka dhacay Dalka Etoobiya
Soomaaliya oo ka walaacsan jiheyn cusub oo ka timid maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka
Sacuudiga oo sheegay in ay burburiyeen sideed diyaaradood oo hubeysan oo ay soo gantay kooxda Xuutiyiinta
Afhayeenka xukuumadda oo sheegay in Ra’iisul Wasaare rooble diyaar u yahay si wadidda wadahadallada mucaaradka.
Qoraalkii ugu horreeyay ee Twitter la soo dhigay oo malaayin doolar lagu iibinayo
Raisal Wasaare Abiy Axmed’ oo fariin u diray shacabka Itobiya.
Mareykanka oo ciidankiisa kala baxay Soomaalita
axmed shiikh - January 17, 2021 0
Ku dhawaad 700 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka baxay gudaha Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha Pentagonka Mareykanka. Hawlgalka ka bixitaanka ciidanka Mareykanka ee...
Madaxweyne Xasan Sheikh oo wacad ku maray in uu dhacaayo Banaanbaxa...
Goobaha ay dadku iskugu imaanayaan oo ay iska raacayaan Banaabaxayaasha oo...
Badeecadihi imaan jiray magaalada Jowhar oo shabaab ku soo Rogeen Canshuur
Matoor ololaya oo diyaarad ka soo dhacay oo ku dul dhacay...
Hogaamiyihii mucaaradka Rwanda Seif Bamporiki oo lagu dilay Koonfur Afrika oo...
Gudoomiye Murusal oo ka soo yeeray war aan ka farxin Madaxweyne...
Soomaaliya oo ka walaacsan jiheyn cusub oo ka timid maamulka madaxweyne...
axmed shiikh - March 7, 2021 0
Sacuudiga oo sheegay in ay burburiyeen sideed diyaaradood oo hubeysan oo...
Afhayeenka xukuumadda oo sheegay in Ra’iisul Wasaare rooble diyaar u yahay...
Qoraalkii ugu horreeyay ee Twitter la soo dhigay oo malaayin doolar...
Qasaare ka dhashay Weerar Qarax xalay Ciidamo lagula eegtay Wanla-weyn ee...
axmed shiikh - January 28, 2021 0